Nooca 104 ee ah LUQADDA CAALAMKA - Vi-VersiGoo nooca asalka ah & nooca bilawga En-VersiGoo - Dhulka Barakaysan ee Daraasaadka Vietnam
Websaytka WAXBARASHADA HOLYLAND EE VIETNAM - Holylandvietnamstudies.com isticmaalaa Gtranslate1 qalab, sidaa darteed Akhristayaashu waxay riixi karaan calanka waddan kasta - waxay ka arki karaan dhinaca kore ee midigta kore ee bogga shabakadda - si loo arko 104 turjumaad luqadeed dhammaan waxyaabaha kujira websaydhkan.
Caawinta GTRANSLATE Akhristayaasha adduunka oo dhami waxay arki karaan MUDDADA LUUQA EE VUDDAMADA daraasadaha 104 turjumaad luqadeed.
Websaydhka THANH DIA VIET NAM HOC [Thánh địa Việt Nam meydc] - thanhdiavietnamhoc.com waa nooca asalka ah ee Fiyatnaamiis. Iyo barta internetka SANADKA Quduuska ah ee ardayda fasallada VIETNAM - Holylandvietnamstudies.com waa nooca luqadda ajnabiga ah ee Ingiriisiga kaasoo ah nooca bilowga ah ee loogu talagalay tarjumaadaha kale ee luqadaha ee adduunka. GTranslate tarjumi kara hadda Luqadaha 1042 oo dib ayaan u cusbooneysiin doonaa luqadaha haray dhawaan.
1: abuuraha GTranslate waa kuma Edvard Ananyan - aasaasaha & agaasimaha guud ee shirkadda GTranslate Inc - sidoo kale waa aqoon yahan fisigisyahan ah oo haysta shahaadada masters-ka Jaamacada Youngstown State, Ohio, USA. Wuxuu ku bilaabay shirkaddiisa IT-ga 2006-dii isagoo la shaqeeya jagada barnaamijka barnaamijka Netsys JV LLC. Sanadkii 2009 waxaa loo xushay inuu noqdo ardeyda kuleejka Koodhka ee Google wuxuuna la shaqeeyey Google Inc halkaasoo uu ku abuuray Joomla Nuqul Nuqul ah. Laga soo bilaabo 2010 wuxuu qandaraas la-talin la leh Bangiga Adduunka halkaas oo uu ku horumarinayo Nidaamka Is-qorista Cabashooyinka ee maaraynta mashruuca iyo ujeeddooyinka la-dagaallanka musuqmaasuqa. (Xigasho: gtranslate.io)
2: GTranslate wuxuu adeegsaday tarjumaadaha mashiinka neerfaha ee Google kuwaas oo aad ugu saxsan labada nooc luuqadaha caan ah. Tusaale ahaan tayada turjumaada ee isbaanishka ilaa ingiriiska waxay gashay 6 ka 10, 10kuna waa tarjumaad qumman. Tarjubaanada bini-aadamka guud ahaan waxay qiimeeyaan 8.5 iyo tarjumaadaha mashiinka neerfaha cusub ayaa ku dhuftay 8.3. (Xigasho: gtranslate.io)
(Booqday jeer 857, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 2,825
← Aqoon-isweydaarsiga Caalamiga ah ee VIETNAMESE STUDIES iyo TAIWANESE STUDIES 11 / 2019 (Qaybta 1)
Hordhac - HUNG NGUYEN MANH, Kuxirfadha cilmiga leh, Dhakhtarka cilmiga fiyuusiyada ee taariikhda →
Booqashada Maanta: 96
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,017
Guud ahaan Wadarta: 285,912